२०७६ विद्युत् उत्पादनको स्वर्ण वर्षः ४० आयोजनाबाट ११५० मेगावाट !
काठमाडौं । यस वर्ष विद्युत् उत्पादनको दृष्टिले ऐतिहासिक वर्ष हुने भएको छ । कुल ४०
टीबीएम मेसिनले १७ महिनामै खन्यो भेरी–बबई सिँचाइको १२ हजार मिटर सुरुङ
काठमाडौं । प्रविधिको प्रयोगले नेपालको बहुचर्चित तथा बहुप्रतिक्षित भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ १ वर्ष
रञ्जुलाई बिनाको प्रश्नः भ्रष्टाचार प्रमाणित नभए मेरो चरित्रहत्याको जिम्मेवारी लिनुुहुन्छ ?
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयलाई जोडेर आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग किन अटाएन लगानी सम्मेलनको शोकेसमा ?
काठमाडौं । सरकारले अर्को साता राजधानीमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनका लागि ६३ परियोजना शोकेसमा